Cricout Cricket ရမှတ်များနှင့်သတင်းများ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Cricout ခရစ်ကက်ရမှတ် & သတင်း
Cricout ခရစ်ကက်ရမှတ် & သတင်း APK ကို
တိုက်ရိုက်ရမှတ်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေဖန်သုံးသပ်ချက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမိတ်ဆွေများနှင့်တိုက်ရိုက်ကျွမ်းကျင်သူများက! အောက်ပါခရစ်ကက်ဒီပျော်စရာဖူးပါ။
ပုရစ်ပရိတ်သတ်များအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်တစ်ဦးကလှပသော app ကို Cricout တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘောလုံးကို-by-ဘောလုံးကိုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်, ကျွမ်းကျင်သူမှတ်ချက်များ, မိတ်ဆွေများ & ပုရစ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူလူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အစာကျွေးခြင်းအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပုရစ်သတင်းသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ထိုးပေးပါသည်။
ဤတွင်မီးမောင်းထိုးပြတန်ဖိုးရှိ features တချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုနှင့်သင်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုမျှဝေခွင့်ပြု * Interactive မှဘောလုံးကို-by-ဘောလုံးကိုတိုက်ရိုက်ပုရစ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။
အဆိုပါဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ထဲမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူ SNAP attach နှင့်ပုရစ်အမှတ်တရများတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး catalog တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု * တိုက်ရိုက်ရုပ်ပုံခွဲဝေမှု။
* Cricout ကူးမိတ်ဆွေများကမေတ္တာရှင်သင့်ရဲ့ပုရစ်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ခြင်း။
* ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနောက်ဆုံးရခရစ်ကက်သတင်းနှင့်အမြင်များတစ်စိတ်ကြိုက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်း feed ကိုသင်တို့ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
ပွဲဖျော်ဖြေပွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ * ပြည့်ပွဲ scorecards ။
* စိတ်ကြိုက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်တဆင့်သွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်း, ချောလာမည့်နှင့်ပူပွဲ၏ Listings ။
သငျသညျကိုလိုက်နာလိုသောပုရစ်ပွဲ၏အဓိကအဖြစ်အပျက်များများအတွက် * တိုက်ရိုက်တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများ။
* သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပုရစ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏အောက်ပါကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်။ ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ပို့စ်များကိုသင့်ရဲ့သတင်းစာကျွေးခြင်းနှင့်ပွဲဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ထဲမှာ interleaved နေကြသည်။
ဒါဟာ app ကို download လုပ်ပါကသင်၏မိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်နှင့်ခရစ်ကက်အောက်ပါအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးအလှန်ဖန်တီးရန်အချိန်ပဲ!
ကြှနျုပျတို့၏ website http://cricout.com သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များအတွက် https://www.facebook.com/cricout မှာ Twitter ပေါ်တွင်နှင့်ငါတို့လို @Cricout အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။ သင့်ရဲ့အဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်အဘို့, support@cricout.com ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့
* အများအပြားအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးတက်မှုအနည်းငယ် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ။
Cricout ခရစ်ကက်ရမှတ် & သတင်း
7.27 ကို MB